14 / 07 / 2021 14 / 07 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 339 Views စာ0မှတ်ချက် 76200 Bro Thor ရဲ့ New Asgard, .ရာဝတီ, Avengers, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Avengers: The Infinity Saga, ပထမဦးစွာမျှော်, Korg, Lego, Lego Avengers Endgame, Lego Marvel, Marvel, Miek, အဆိုပါ Infinity Saga, Thor, YouTube ကို
နောက်တစ်ခုကို Thor- ရပ်ကွက်ကြည့်ရှုပါ Lego Marvel ၂၀၂၁ သည် 2021 အတွက် Bro Thor New Asgard အတွက်ပထမဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အွန်လိုင်းတွင်ဆိုက်ရောက်ခဲ့ပြီးထူးခြားသောမော်ဒယ်၏အတွင်းပိုင်းအသေးစိတ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
လာမည့် Lego Marvel 76200 Bro Thor ၏ New Asgard သည် MCU ရှိအမြင့်မားဆုံးဘုရားသခင်၏အဆင်ပြေဆုံးအိမ်သို့လည်ပတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခေါ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်စောစောစီးစီး YouTuber Ashnflash သို့ပို့လိုက်သည်။ ပီဇာဖုံးအုပ်ထားသောကြမ်းခင်းများသည် Asgard ၏ရွှေရောင်ခန်းမများကဲ့သို့တင့်တယ်လျောက်ပတ်မှုမရှိသော်လည်းအစုံသစ်သည်ပထမကိုရောက်စေသည် Lego Korg နှင့် Miek ၏ကြားမှာ။
Taika Waititi ၏ကျောက်ဆောင်ဇာတ်ကောင်သည်အပိုင်းအစအသစ်များနှင့်ပုံသဏ္dualာန်နှစ်မျိုးတပ်ထားသောကိုယ်ထည်အသစ်နှင့်အတူတည်ဆောက်မှု၏အဓိကအကျဆုံးအချက်မှာဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်မလုံလောက်သကဲ့သို့သေးငယ်သည့်ပုံစံသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပွဲများကိုသူမျှော်လင့်သည့်အတိုင်းမသွားနိုင်သည့်အတွက်မျက်နှာတစ်မျိုးတည်းနှင့်ပါလာသည်။
Korg ကို Thor နှင့် Miek တို့ပူးပေါင်းပြီးပလတ်စတစ်ကောင်တာအတွက်ဒီဇိုင်းအသစ်များဖြင့်ကိုယ်စားပြုသည်artမျက်လုံးများစွာပါ ၀ င်သည့် s အပါအဝင်၎င်းဂိမ်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်နှင့်ပိုကြည့်နိုင်သည်။
ကျန်တဲ့တည်ဆောက်ပုံတွေကတော့စိန်ခေါ်မှုအတွေ့အကြုံလိုချင်တဲ့သူကိုအံ့အားသင့်စေမှာမဟုတ်ဘူး။ Marvel နှင့် Lego တူညီတဲ့။ ဤအရာများထဲမှတစ်ခုသည်တီဗွီဖန်သားပြင်ပုံစံဖြစ်သည် Fortnite ၏ပွဲစဉ်ကိုသရုပ်ဖော်သည်မဟုတ်ပါ ဒါကြောင့်ရုပ်ရှင်၌ရှိသကဲ့သို့။ အဲဒီအစား၊ Lego ဂိမ်းတွင် Korg dual-wielding Mjolnir နှင့် Stormbreaker တို့ကိုပုံဖော်ထားသည် - Sakaarian gladiator သည်မြင့်မားသောရည်မှန်းချက်ရှိကြောင်းမည်သူသိသနည်း။
"ဒါဟာတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအနာဂတ် Infinity Saga အစုံတွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ထုံးတမ်းစဉ်လာတစ်ခုပါ" ဟု Ashnflash ကမှတ်ချက်ချသည်။ “ ဒီကိစ္စမှထွက်ပေါ်လာရန်အဓိကအရာကသူတို့ဟာဒီလိုမျိုး Diorama ကိုလုပ်နေတယ်ဆိုရင် WandaVision တစ်ခုဘယ်မှာလဲ။ လာစမ်းပါ Lego! "
သငျသညျယ်ယူနိုင်ပါသည် Lego Marvel 76200 ကို Bro Thor ၏ New Asgard သည်သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင်တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးသို့ပေါင် ၂၇.၉၉ / ဒေါ်လာ ၂၉.၉၉ / ယူရို ၂၉.၉၉ ဖြင့်ရောက်ရှိသည်။
← ဒီအထင်ကရအဝါရောင်လက်များနှင့်အတူ LEGO high- ငါးခုပေးပါ
ဒီသစ်ကို LEGO ပါသလား Marvel အစုံတစ်ခုမညီကြောင်းကိုးကားပါဝင်သည်? →